Imimandla eyahlukileyo yemeko yendalo iyathintela indawo ezibonakalayo kwesikhumba imihla ngemihla. Naluphina utshintsho olushushu, ilanga, umoya, iindidi ezincinci kunye nothuli, ukungcola kwamakhemikhali ahlukahlukeneyo ... Zonke ezi zinto zangaphandle zichaphazela umbala wendalo wesikhumba. Ukulondolozwa kwesikhumba kwiimeko ezintle, abafazi basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokucoca ulusu lobuso. Namhlanje siza kuqwalasela ukuba yintoni ukucoca ubuso obushushu.
Ikhumba elibi kakhulu lobuso lijongene nentsholongwane kwimiphumo emibi. Kule nkalo, iiseli zelusu zihlaziywa rhoqo. I-epithelium efile ithathelwa indawo yamaseli amancinci. Olunye ukhuseleko olongezelelweyo ulusu luyimfihlo yecandelo le-sebaceous secret composition, eliyingozi yonakalisa ibhaktheriya ye-pathogenic. Ngokuqhelekileyo iincinci ezincinci zothuli zivalela iingqungquthela zenyama, ngoko ziphulaphula ukusebenza kwazo. Kwakhona, ukungcola kweengqungquthela ezixhambileyo kunokukhokelela kwi-acne kunye ne-acne, kwaye ezinye iindawo zesikhumba zinokutsha. Konke oku kubangela ukuphulwa komsebenzi wokukhusela, loo ngozi ibizwa ngokuba yingxaki.
Indlela yokujongana neengxaki zesikhumba ezingcolileyo?
Zininzi iindlela zokucoca ubuso. Ezinye zazo ziquka ukusetyenziswa kwamagqabi akhethekileyo, amafutha kunye nama-lotions. Zonke ezi mveliso zihlambulula iipropati, zikhuthaza ukuthambisa, ukugaya nokucwiliswa kwesikhumba kunye nezinto ezincedo. Ukusebenza kweziyobisi zonyango kuncitshiswe kakhulu xa ulusu lwe-pores luvaliwe. Ngokuqhelekileyo, imali enotyalwayo kwiziyobisi ayifanelekanga, kuba iipresam ezilungileyo zingenakuncipha kakhulu ngenxa yokungcola kwesikhumba. Ngoko ke, ngaphambi kokuba usebenzise izimonyo, kucetyiswa ukuba uhlambuluke ngokukhethekileyo kwesikhumba sombuso kwi-salon enobuhle.
Ukuhlanjululwa kaluphi na?
Inkqubo yokucoca iquka inkqubo yokwenza i-peeling, eyasusa iiseli zesikhumba ezifile, ukucoca ngokuthe ngcembe i-pores kwi-contamination, oko kuphucula umphumo wokulungiselela izimonyo. Ulusu "luphefumula" kwaye lufumana umbala wendalo.
Ngaphambili, kwakusetyenziselwa indlela yokucoca kwesikhumba kuphela, kodwa ukucoca i-ultrasonic ngoku kusetyenziswa ngokuthe tye.
Iziphumo zokucoca i-ultrasonic
Ukucocwa kwe-Ultrasonic ngokugqithisileyo kuyisusa iiplates eziqhekezayo kwesikhumba, kususa iiplagi ezixhasayo. Ngxeshanye kunye nokucoca, iiseli zesikhumba ziyaxutywa.
Ngenxa yoko, ukungena ngokujulileyo ngexesha lokucoca kuphucula amandla okusebenza kolukhuni, kubuyisela ukunikezelwa kwegazi kwaye kufaka umgangatho wokutya kwesikhumba.
Ukunyaniseka kwesikhumba kuya kubuya kwinto eqhelekileyo, ukuphuma kwe-lymph kukhawuleza, enoxanduva lokususa izinto ezinobungozi ezivela kwiiseli zesikhumba.
Ukuphucula ukuvuselelwa kwesikhumba, kukhuthaza ukukhula kweemfono eziqhenqa.
Emva kweseshoni yokuqala yokucoca i-ultrasound, uya kubona ingqamaniso ebonakalayo phakathi kwendawo yangoku kunye neyokudlulileyo, apho isikhumba sakho sasiphambi kwenkqubo. Ulusu luguqulwe ngokuphawulekayo ukuze lungcono. I-oval ebusweni ikhutshwe, iminyango yomhlaba iyanyamalala, i-smoothing yayo iyalala, njengento yonke-ulusu lobuso lubukeka luncinci, lukhanya ngakumbi kwaye lubuqili.
Ziziphi iingenelo zokucoca ubuso be-ultrasonic?
1. Inkqubo yonke ayithathi ingaphantsi kwemizuzu engama-30 (kwiimeko ezinqabileyo, xa kuqhutywe ezinye izinto ezifanelekileyo, ubude beseshoni bunokunyuka ukuya kwiyure enye);
2. Akukho mfuneko yokuba i-aneshesia, inqubo ayibuhlungu ngokupheleleyo. Iibhulo ezikhethekileyo ekudibanisaneni nesikhumba akubangela ukuba ziveze, ngokuchaseneyo, inkqubo inika umdla;
3. Ngexesha lokucoca, umphumo kuphela kwiiseli ezinokwenziwa, ngelixa iiseli eziphilayo zihlala zingatshintshi;
4. Ukugqitywa kokungabikho kwexesha lokuvuselela, akukho nakwezinye iindlela zokulondoloza.
Ukuhlanjululwa kwebuso ngobuncwane kuphela kuyimfuneko yokuphinda inqubo rhoqo. I-Cosmetologists icebisa ukucoca ubuso ubuncinane kanye ngenyanga.
Ngokubanzi, kunokuthiwa ukuba inqaku elithi "ubuhle ludinga umnikelo" alusebenzi ekuhlanjululeni isikhumba, kuba le nkqubo yindlela enhle kakhulu yokufumana umphumo omuhle kwiindleko eziphantsi.
Indlela yokukhawuleza ukulahla amachashaza amnyama ekhaleni
Inkathazo ebusweni buso
Imihla yobisi besikhumba emva kweminyaka engama-40
Ukupheka kweoli efunekayo kwesikhumba ejikeleze amehlo
Indlela yokuhlamba i-mascara nge-eyelashes
Isonka siyimfutho imihla ngemihla
Indlela yokukhetha ibhatyi yomntwana?
Ukukhetha i-shampoo yokunakekelwa kweenwele ezifanelekileyo
Umtshakazi omhle: iintlobo zomtshato zeenwele ezinde
Unyango lwe-pancreatitis engapheli kunye nezindlela eziqhelekileyo
I-shortbread cookie ene pear
Indlela yokukhulisa umntwana ophumelelayo. Ubuchwepheshe beJapan
Siyakhohliswa: Indlela yokwahlula oku kuhlaziywa kwisithethe kwi-Intanethi
I-Cheesecake kunye nenhlama ye-chocolate